Mapisarema 75 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Tinokuvongai, Mwari; Tinovonga, nokuti zita renyu riri pedo; Vanhu vanoparidza mabasa enyu anoshamisa.
"Kana ndichiwana nguva yakafanira, Ndichatonga zvakarurama.
Pasi pose panyauka navose vagerepo; Ndini ndakamisa mbiru dzayo.
Ndakati kuna vanamanyawi , `Regai kuita namanyawi;' Nokuna vakaipa, `Regai kusimudza runyanga.'
Regai kusimudza runyanga rwenyu kudenga; Regai kutaura nomutsipa mukukutu."
Nokuti kunyange kumabudazuva, kana kumavirira, Kana kurenje, hakuzi ikoko kunobva kukudzwa.
Asi Mwari ndiye mutongi; Anoninipisa mumwe achikudza mumwe.
Nokuti muruoko rwaJehovha munomukombe, newaini inopupuma; Uzere nezvakavhenganiswa, zvino anodurura mauri; Zvirokwazvo, vakaipa vose venyika vachasvina masese awo, nokuamwa.
Asi ini ndichaparidza nokusingaperi, Ndichaimbira Mwari waJakobho nziyo dzokurumbidza.
Nyanga dzose dzavakaipa ndichadzigura; Asi nyanga dzavakarurama dzichasimudzwa.